Sidee ku dhacday in wiilkaan 8 jirka ah sanadkasta ay soo gasho lacag dhan 22 Million? Ogoow qaabka uu ku kasbado lacagtaas iyo waxa uu ka shaqeeyaba. – Filimside.net
Sidee ku dhacday in wiilkaan 8 jirka ah sanadkasta ay soo gasho lacag dhan 22 Million? Ogoow qaabka uu ku kasbado lacagtaas iyo waxa uu ka shaqeeyaba.
Hadii aad xisaabiso lacagihii intaad nooleyd kusoo galeen oo dhan waxaan macquul aheyn iney gaarto 22 Million oo doolar waana lacag aad u fara badan lkn wiil yar oo 8 jir ah ayaa lacagtaas kaliya mudo sanad ah kusoo xareeyo.
Ryan waa wiil yar oo 8 jir ah wuxuuna leeyahay Youtube Kanaal kaasoo lagu magacaabo Ryan Toys Review asigoo kanaalkaas kusoo bandhigo noocyada cayaaraha ilmaha ku cayaaraan asigoo kaalinta 1aad ka galay liiska dadka Youtube ka shaqeysto maadaama uu sanadkii lasoo dhaafay shaqeystay 22 Million oo dolar sida ay sheegtay Forbes.
Ryan aabihiis waa aasaasihii kanaalkaan asigoo aasaasay mudo haatan laga joogo 3 sano kahor wuxuuna kusoo bandhigi jiray alcaabta ilmaha iyo muuqaalo uu wiilkiisa ka qaaday wuxuuna durba helay shacbiyad ballaaran asigoo kanaalkaas noqday mid caalami ah.
Kanaalkaan ayaa mudadii uu jiray wuxuu helay 26 bilyan oo daawasho tan iyo markii la aasaasay mar Ryan la weydiiyay sirta ka dambeyso in dadka kanaalkiisa aad ula socdaan ayaa wuxuu ku jawaabay in dadka u daawadaan maadaama uu yahay qof madadaalo badan sidoo kalana dadka ka qoslisiiyo.
Lacagaha uu kanaalkaas sanad kasta soo xareeyo 15% waxaa lagu xareeyaa Akoonka Ryan uu Bankiga ku leeyahay si uu ula baxo hadhow markuu 18 sano gaaro.
Waxaa Aqrisay 497